Interview – DigitalTimes.com.mm
CELEBRITY HUBS Interview Samsung
Samsung Brand Ambassador အဆိုတော် Bobby Soxer နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
မိုးရာသီမှာရန်ကုန်ရှိုးတွေ ထက် နယ်ရှိုးတွေကို အများဆုံး သွားဆိုဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောလာသူကတော့ အဆိုတော် Bobby Soxer ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Bobby Soxer က Samsung ရဲ့ Brand…
ညီမအတွက် ဖုန်းက တစ်ရာ ရာခိုင်နှုန်း အသုံးဝင်တဲ့ဆိုတဲ့ မေမြင့်မိုရ်
MRTV4မှာအခု ပြသနေတဲ့ ဆုံစည်းခြင်း မိုးတိမ်များ ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး မေမြင့်မိုရ်နဲ့ ဆုံဖြစ်ပါတယ်။ မေမြင့်မိုရ်နဲ့ ဆုံတုန်း သူမရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုနဲ့ သူကိုင်ထားတဲ့ ဖုန်းအကြောင်းကို အခုလိုမေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခု…
ဂီတလောကထဲကို ၂၀၁၀ခုနှစ်က ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် ပရိတ်သတ် အခိုင်အမာ ကို ရရှိနေတဲ့ သူကတော့ တေးရေး၊ တေးဆို မိုးထက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိုးထက်နဲ့ တွေ့ဆုံတုန်း သူရဲ့ဂီတ လှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူ ဖုန်းအကြောင်းကိုပါ မေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။…
အနုပညာလောကထဲကို ကားပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာမော်ဒယ်လုပ်ရင်းနဲ့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး အခုဆိုရင်သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကိုပါ ဝင်ရောင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်သူပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်အောင်ဒင်ချစ်သော မိန်းမများ ဇာတ်ကားမှာ အရောင်းစာရေးမလေးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူမနဲ့တွေ့တုန်း သူ ရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အတူ ဖုန်းအကြောင်းကို…
အားလပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ ဖုန်းကို သုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ မိစန္ဒီ
မြန်မာပြည်ရဲ့ မိန်းကလေး Rapper တွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အဆိုတော်မိစန္ဒီနဲ့ တွေဆုံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မိစန္ဒီဟာ မကြာခင်ရက်ပိုင်းမှာ သူမရဲ့တတိယအခွေ ထွက်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် သူမရဲ့လတ်တလော လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အတူ ဖုန်းအကြောင်းလေးတွေကို…
ZMA ဖုန်းဆိုင်မှ မဇင်မာအောင်နဲ့တွေ့ဆုံခြင်း
ဒီတစ်ပတ် အင်တာဗျူးကဏ္ဍအတွက် ဖေါ်ပြပေးချင်တဲ့ဖုန်းဆိုင်ကတော့ ZMA ဖုန်းဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ZMA ဖုန်းဆိုင်ဟာဆိုရင် ဖုန်းဈေးကွက်မှာ ရပ်တည်လာတာ ၄နှစ်ကျော် ၅နှစ်ကာလထဲကို ရောက်ရှိလိုနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ZMA ဖုန်းဆိုင်မှာ ဘယ်လိုဖုန်းအမျိုးအစားတွေရှိပြီး…
တစ်နေ့ကုန် ဖုန်းနဲ့ပဲ အလုပ်ရှုပ်နေတယ် ဆိုတဲ့ ဟန်သီ
ဒုတိယအခွေအတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ မော်ဒယ်အဆိုတော် ဟန်သီနဲ့တွေဖို့ သူမရှိရာနေရာကို သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူမနဲ့တွေ့ဆုံတုန်း သူမရဲ့အခွေအကြောင်းနဲ့ ဖုန်းအကြောင်းကို မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ Q. လတ်တလော အနုပညာလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ ဘာတွေလုပ်နေလဲ။ ဟန်သီရဲ့ဒုတိယ Albumအတွက်…
ဒီတစ်ခါ အင်တာဗျူးကဏ္ဍအတွက် ရွေးချယ်လိုက်တဲ့သူကတော့ မော်ဒယ်ရှိုးပွဲတွေမှာမပါမဖြစ်ပါတဲ့ မော်ဒယ် အောင်လေးပါဖြစ်ပါတယ်။ အောင်လေးနဲ့တွေဆုံတုန်း အနုပညာလှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူ ဖုန်းအကြောင်းကို ပါမေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Q. လတ်တလောအနုပညာလှုပ်ရှားမှုကို ပြောပြပေးပါလား။ ဖွင့်ပွဲတွေ တက်ဖြစ်တယ်။ ကြော်ငြာတွေရိုက်ဖြစ်တယ်။…
Android User တစ်ယောက်ပါလို့ ပြောတဲ့ မော်ဒယ် L ဘောက်နူး
မော်ဒယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် သရုပ်ဆောင်ဘက် ကိုပါ ခြေလှမ်းတွေ ရှေ့ဆက်နေတဲ့ မော်ဒယ်မင်းသမီးလေးတစ်ယောက်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ သူကတော့ မော်ဒယ် L ဘောက်နူးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမနဲ တွေ့တုန်း…
လူငယ်ဓာတ်ပုံဆရာ Kansuho နဲ့တွေ့ဆုံခြင်း
အောင်မြင်မှုအတွက်ကြိုးစားနေတဲ့ လူငယ်တွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲကမှာ ဓာတ်ပုံလောကမှာ နာမည်တစ်လုံးရနေတဲ့ လူငယ်ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ သူကတော့ ဓာတ်ပုံဆရာ Kansuho ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့တွေ့ဆုံတုန်းပြောဖြစ်သမျှကို ပြန်လည်ဝေငှလိုက်ပါတယ်။ Q. ဓာတ်ပုံဆရာလောကထဲကို စပြီး ဝင်ဖြစ်ပုံကိုပြောပြပေးပါလား။ ဒီလောကထဲကိုရောက်တာ…
ဖုန်းကညီမအတွက်မရှိမဖြစ်အရာတစ်ခုပါလိုပြောတဲ့ မော်ဒယ် ရွှေရေးချယ်
အနုပညာလောထဲကို ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့သူ Photo Model တစ်ယောက်အနေနဲ့ မဂ္ဂဇင်းတော်တော်များများမှာတွေရတဲ့သူ သူမကတော့ မော်ဒယ်ရွှေရေးချယ် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေရေးနဲ့တွေ့တုန်း သူမရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူ ဖုန်းအကြောင်းကိုလည်း အခုလိုမေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Q. အနုပညာလောကထဲကို…
ဖုန်းက သူမအတွက်မရှိမဖြစ်ပါလို့ ပြောတဲ့ ဖြူစင်ရှင်းသန့်
မော်ဒယ်လောကကို ၂၀၁၀ ကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့သူ ပြိုင်ပွဲတွေ ဆက်တိုက်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ဆုတွေလည်းအများ ကြီးရခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်လေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့ လောလောဆယ် Ms. OSIM MYANMAR 2017 ဆုကိုရရိထားတဲ့ မော်ဒယ်…
အချစ်သင်္ကေတဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးနဲ့ ပရိတ်သက်တွေအသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရတဲ့သူ အခုဆိုရင်လည်း MRTV 4မှာသူမရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲလေး ချစ်သူထွင်းတဲ့အက္ခရာ ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်း တွဲလေးလည်း လာနေ ပါတယ်။ အဲဒီ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးဟာ သူမအတွက် ၇…
ဖုန်းကသုံးတတ်ရင် တကယ်ကိုစွမ်းအားရှိတဲ့လက်နက်တစ်ခုပါလိုပြောတဲ့ ခါရာ
ကောင်မလေးတွေရဲ့အသည်းကျော် ကိုးရီးယားမင်းသားလား လို့ ထင်ရတဲ့သူ ၊ သူကတော့ မော်ဒယ်ကနေ အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် သရုပ်ဆောင်ဘက်ကိုပါ ခြေလှမ်းတွေလှမ်းလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ မော်ဒယ် ခါရာပဲဖြစ်ပါတယ်။…
ဖုန်းဆိုရင် Samsung ပဲသုံးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ မေဘရဏီသော်
Miss Universe Myanmar 2015 အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ Miss Universe Myanmar 2015 မေဘရဏီသော်နဲ့ တွေဆုံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လတ်တလောသူမရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူ သူကိုင်တဲ့ဖုန်းအကြောင်းကိုလည်း မေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။…